Talata, Janoary 26, 2021 Alakamisy, Aogositra 12, 2021 Douglas Karr
Mpanohana goavambe roa an'ny Authentication Two-Factor (2FA) amin'ny sehatra rehetra izay hazakazaka aho. Amin'ny maha mpivarotra ahy izay miara-miasa amin'ny mpanjifa sy ny angon-drakitra mpanjifa dia tsy hitandrina be loatra momba ny fiarovana aho ka ny fitambaran'ny tenimiafina isan-karazany amin'ny tranokala rehetra, amin'ny fampiasana Apple Keychain ho toy ny fitehirizam-bokatra ary ny fahazoana 2FA isaky ny serivisy dia tsy maintsy atao. Raha toa ka mihazona WordPress ho rafitra fitantanana atiny ianao, dia namboarina matetika ny rafitra handefasana hafatra mailaka
Na dia tsy tiako aza ny mandoka azy dia tokony hiaiky aho fa misy fotoana ahitan'ny olona ny adiresy mailaka ary nifandray tamiko tamina orinasa ara-dalàna. Raha ny marina dia nanakarama mpandraharaha vitsivitsy aho ary nividy sehatra vitsivitsy tamin'ireto mailaka nalefany tany ivelany nalefa tamiko ireto. Izany dia nilaza fa antenaiko ny fanajana ireo fifandraisana ireo: Fikarohana - Te hahafantatra aho fa nampiavaka ahy manokana ho an'ny